Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo(Last Updated On: 18/02/2020)
Haddii aad ku talajirto in aad aragto dalalka badan halka tareenka ee Europe safarka waxaa laga yaabaa in kuwa caqliga leh si ay u eegaan maalgashiga Pass Interrail ah, ama waxa aan aheyn muwaadiniinta EU ugu yeedhaan Eurail. An Interrail Pass ka dhigi doonaa safarka tareenka fudud. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad tahay on a miisaaniyadda la adkeeyo, tigidhada shaqsi shaqayn kartaa jaban (gaar ahaan haddii aad inta badan u safraya bari ee Germany). Tixgeli miisaaniyada iyo cilmi qaar ka mid ah ka hor inta aad aad pass rail. Our website saveatrain.com waa meel ku fiican si ay u bilaabaan si ay u caawiyaan qorsheeyo aad safar guud ahaan Yurub.
Most trains have either a restaurant, gaadhifardood cafe ama gaadhi fudud in soo iibinta ismaris, cabitaannada fudud iyo ka badan. Laakiin haddii aad ku jirto miisaaniyad safarka dhagan ama aad qabto gaar ah shuruudaha cuntada, waa kuwa caqliga leh in ay keenaan fudud qaar ka mid ah kula on safarkaaga.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-tips-for-traveling-by-train-in-europe%2F - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)